macOS Big Sur 11.5.2 Navoaka ho an'ny mpampiasa rehetra misy fanamboarana manan-danja | Avy amin'ny mac aho
macOS Big Sur 11.5.2 Navoaka ho an'ny mpampiasa rehetra amin'ny fanamboarana manan-danja
Apple dia natomboka vao haingana ary natokana ho an'ny mpampiasa rehetra ny macOS Big Sur andiany 11.5.1 mba hanitsiana lesoka lehibe ary noho izany dia nanoro hevitra mafy ny hametrahana ity kinova vaovao ity. Toy izany koa no mitranga ankehitriny ny orinasa dia namoaka kinova 11.5.2 ary fa amin'izao fotoana izao dia fantatra ihany fa misy fanitsiana hadisoana.
macOS 11.5.2 dia misy amin'ny mpampiasa rehetra ary tokony hiseho ao amin'ny System Preferences> Fanavaozana ny lozisialy tsy ho ela raha mbola tsy. Tsy mbola fantatra mazava izay tafiditra ao amin'ilay fanavaozana mihoatra ny "fanamboarana bibikely ho an'ny Mac anao." Amin'izao fotoana izao, Apple dia manisy lisitra ny macOS 11.5.2 ao amin'ny pejiny fanavaozana ny fiarovana azy ho "tsy misy firaketana CVE navoaka." Ho hitantsika eo raha hiova izany.
Tsy toy ny kinova beta izay anoroanay hevitra ny tsy hametrahana azy ireo amin'ny solosaina voalohany, izany hoe amin'ireo izay ampiasainao isan'andro na manana fampahalalana sarobidy. Fanavaozana ampahibemaso navoakan'i Apple tena ilaina ary tsy maintsy apetraka ka ny zava-drehetra dia miasa araka ny tokony ho izy.
Na dia mbola tsy fantatsika aza izay ao amin'ity fanavaozana ity, raha namoaka azy i Apple, dia satria ilaina izany ary noho izany dia tsy maintsy apetraka. Sarotra be ny miteraka olana satria momba ny fanamboarana bibikely (raha ny tokony ho izy dia tsy ampy taona izy ireo satria raha tsy izany dia nopetahany antsipiriany izany) sy ny fanatsarana ny fahombiazana. Sarotra amin'ny tsy fahombiazana. Tsy toy ny hoe rehefa napetraka indray ny rafi-pandaminana iray dia mety hianjera na hanome olana izy io. Amin'ireny tranga ireny dia tena tsy azo inoana izany. Koa mamporisika anao aho hametraka ity kinova 11.5.2 an'ny macOS Big Sur ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » macOS Big Sur 11.5.2 Navoaka ho an'ny mpampiasa rehetra amin'ny fanamboarana manan-danja
Apple dia namoaka ny watchOS 8 beta 5 miaraka amina toetr'andro vaovao ho an'ny mpamorona
Navoaka ho an'ny mpamorona ny MacOS Monterey beta 5